Chengetedza 42% paDhani kubva muInches: Hip Hop Party Kuvhidzira DVD - Kubudirira kweHurumende
musha » Amazon » Chengetedza 42% paDhani kubva muInches: Hip Hop Party Kuvhidzira DVD
Kurasikirwa Kwemagariro Kunoita Iko Kunoshandisa Dhiyabhorosi DVD Kutenga kubva Amazon
Chengetedza 42% paDhani kubva muInches: Hip Hop Party Workout DVD
Ronga Mutengo $ 14.98 Iye zvino $ 8.63. Click Here kutenga
Kugutsikana Hazvifaniri Kuda Kuda Kuita Basa. Munhu wose anogona kutamba kubva kumasendimita takaita kuti zvive nyore. Kungofanana ne10 kufamba kune zvose zvaunoda kutamba iyi hip hop tsika uye isu ticharatidza iwe kuti sei. Hazvina mhosva kuti unhu hwako kana hutano hwakadini, iwe unogona kuva nenguva yakawanda uchidhanha nzira yako kupinda mumamiriro makuru. Iwe uchatoda kuita basa iri nokuti iri FUN uye iyo ndiyo yakavanzika. Kana iwe uchiwedzera iwe, iyo yakawanda inches iwe ucharasikirwa. Icho icho chiri nyore. Kurasikirwa kwemasentimita hazvina kumbova nyore zvakadaro! Kugamuchirwa kuDhiganiso yeInches Hip Hop Party.
Vatambi: Jennifer Galardi
Mutauro: Shona (Stereo)
Musoro wemutauro: Chirungu
Nharaunda: Nharaunda 1 (US uye Canada chete.) Verenga zvakawanda pamusoro pezvikwata zveDVD.)
Zvaunofunga: 1.33: 1
Nhamba yematokisi: 1
Yakarongwa: NR (Kwete Rati)
Runha Nguva: 45 maminitsi
Avhareji yekamberi Ongororo: 4.1 kubva kune 5 nyeredzi
Dhani kubva muInches: Hip Hop Party
Mutengo we $ 8.63 unofanirwa sewe 6 / 10 / 13 11: 20 AM EST. * Mutengo wemiti uye kuwanika kwakarurama sekune zuva / nguva inoratidzwa uye inogona kuchinja.
June 11, 2013 FitnessRebates Amazon, DVD No Comment	Hip hop dance workout, Hip hop exercise dvd, Hip hop fitness dvd, Hip hop party workout dvd, Basa rekudyidha reDVD kubva kuma inches, Workout DVD inotengeswa